Barnaamijka Maareynta Soo-jeedinta ayaa ah Ganacsi Kordhinaya
Isniin, Disembar 3, 2012 Isniin, Disembar 3, 2012 Jenn Lisak Golding
Labadii sano ee la soo dhaafay, iibku si weyn ayuu isu beddelay markii uu yimid da'da dhijitaalka ah. Gaar ahaan, sida dadku u diraan una helaan soo-jeedinta iibka ayaa lagu wanaajiyey horumarka nidaamyada maaraynta soo jeedinta iibka ee internetka, sida macmiilkayaga TinderBox. Maxay xalalkani ugafiican yihiin in si fudud loogu qoro soo jeedinta iibka ee Microsoft Word? Hagaag, waxaan ka sameynay macluumaad dhan oo ku saabsan.
Waxsoosaarka si weyn ayaa loo kordhiyaa iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah xalalkan, iyo sidoo kale dakhliga. Barnaamijka kumbuyuutarka ku saleysan ayaa hagaajiyay habsami u socodka hawsha iibka, oo saameyn ahaan, wareegga iibka ayaa la hagaajiyay, sidoo kale. Haddii aad tahay ganacsi yar, mulkiile keligiis ah, ama shirkad ganacsi oo weyn, qalabkani wuxuu kuu badbaadin doonaa waqti iyo lacag. Laakiin sidoo kale waxay kuxirantahay sida aad u isticmaasho sidoo kale.
Racfaan ka qaadashada dareenno badan ayaa ah hab fiican oo lagu hawl galo rajo. Soo jeedintaada, waa inaad adeegsataa fiidiyow, maqal (haddii ay khuseyso), iyo sawirro si aad u soo jiito dareenka rajada. Soo jeedinta la calaamadeeyay waa tab wanaagsan sidoo kale, laakiin hubi inaysan xad dhaaf ahayn. Soo jeedintu waa inay ahaataa sida rajadu u socoto in la arko baahiyahooda guud ahaan la daboolo.
Waan xiiseynayaa - sidee hadda u soo dirtaa oo u abuurtaa soo jeedintaada? Iimayl? Dukumiintiga ereyga? Maxay tahay caqabaddaada ugu weyn ee soo jeedinta iibka?
Tags: gettinderboxinfographichindisahamaaraynta soo-jeedintasoo-jeedinta software managementsantuuqa